မကြာမီ ဧကရာဇ် အပြောင်းအလဲဖြစ်တော့မည့် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ခေတ်သစ်နာမည်ကို ဧပြီ ၁ ရက်(ယနေ့) တွင်ြေ? - Yangon Media Group
တိုကျို၊ မတ် ၃၁
လာမည့်ဧပြီ ၃ဝ ရက်တွင် လက်ရှိဧကရာဇ်ကြီး အာကီဟီတို ထီးနန်းစွန့်ချိန်၌ ”ဟိုင်ဆဲ”ဟု ခေါ်သော (ငြိမ်းချမ်းမှုရရှိခြင်း)ခေတ်ကို ဂျပန်နိုင်ငံအနေဖြင့် နှုတ်ဆက်ရတော့မည်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် ဆိုရှယ်မီဒီယာများပေါ်၌ ဂျပန်၏ (၂၄၈)ကြိမ်မြောက် ခေတ်သစ်၏နာ မည်ကို မှန်းဆပြောဆိုမှုများဖြင့် ပြည့်နှက်နေသည်။ အွန်လိုင်း တွင် နာမည်ကျော်နေသည့် နာမည်တစ်ခုမှာ ”အန်ကျူ”(ထာဝ ရငြိမ်းချမ်းရေး) ဖြစ်သည်ဟုဆိုသော်လည်း လူပြောများနေသည့် နာမည်ကို ရွေးချယ်လေ့မရှိဟု လေ့လာသူများကဆိုသည်။
ယင်းခေတ်သစ်နာမည်ကို ရွေးချယ်ရန် ဂျပန်စာပေ၊ သမိုင်း၊ တရုတ် ဂန္ထဝင်ရေးရာနှင့် အရှေ့တိုင်းသမိုင်းအကြောင်းအရာ တို့တွင် ကျွမ်းကျင်သူများပါဝင်သည့် အကဲဖြတ်ပုဂ္ဂိုလ် ကိုးဦးပါဝင်သော ကော်မတီမှတစ်ဆင့် ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ပြီး ဧပြီ ၁ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမည်ဟုဆိုသည်။ ဝန်ကြီးအဖွဲ့ အစည်းအဝေးကိုလည်း သတ်မှတ်လိုက်သည့် ခေတ်သစ်နာမည် ကို အတည်ပြုရန် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။
ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်ချက် ဆွေးနွေးမှုများ ပေါက်ကြားမှုကို ကာကွယ်ရန် အကဲဖြတ်အဖွဲ့တွင် ပါဝင်သူတိုင်းနှင့် ဝန်ကြီးများ အားလုံးသည် မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့် စမတ်နာရီများကို ပိတ်ထားရမည် ဖြစ်ပြီး ကြေညာချက်မထုတ်ပြန်မီ အချိန်အထိ ဝန်ကြီးချုပ်ရုံး တွင်လည်း ကန့်သတ်ထားမည် ဖြစ်သည်။ အတွင်းဝန်ချုပ် ယိုရှီ ဟီဒါဆူဂါက ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၁၁ နာရီ မိနစ် ၃ဝ တွင် တရုတ်အက္ခရာများဖြင့် ရေးသားထားသော စက္ကူတစ်ခုကို ကိုင် ဆောင် ပြီးခေတ်သစ်နာမည်ကို ကြေညာမည်ဖြစ်သည်။
ယင်းနောက် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ပြုလုပ်သော သတင်း စာရှင်းလင်းပွဲမှ နိုင်ငံတစ်ဝန်းသို့ ရုပ်သံမှထုတ်လွှင့်မည့် ကြေညာ ချက်ကိုလည်း ဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဇိုအာဘေးက ထုတ်ပြန်မည်ဖြစ်သည်။ လာမည့် မေ ၁ ရက်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ၁၂၆ ဦးမြောက် ဧကရာဇ်အဖြစ် လက်ရှိအိမ်ရှေ့စံ နာရူဟီတို နန်းတက်မည်ဖြစ်သည်။
ယုံကြည်ပေးလို့ အသံသွင်းကုမ္ပဏီကို ကျေးဇူးတင်စကားဆိုလိုက်တဲ့ အရီနာဂရန်ဒီ
ဆားလင်းကြီး ပြည်သူ့ဆေးရုံ၌ အတွင်းလူနာ များပြားနေသောကြောင့် ဆေးရုံတိုးချဲ့ လူနာဆောင် တည်ေ??